Muuri News Network » Sawirro)Jen. Ameriko oo tababar u soo xiray boqolaal Boolis ah oo ka howlgeli doona..
Sawirro)Jen. Ameriko oo tababar u soo xiray boqolaal Boolis ah oo ka howlgeli doona..
Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed, Jeneraal Baashiir Cabdi Maxamed (Ameriko) ayaa maanta tababar u soo xiray ku dhowaad 500 oo Askari oo ka howlgeli doonta degmada Baardheere ee Gobolka Gedo.
Tababarkan oo soconayay muddo Toddoba Bil ah, ayay Ciidankani ku baranayeen sida loo ilaaliyo ammaanka goobaha muhiimka ah, ka hortagga shaqaaqooyinka, baarista iyo hubinta dembiyada kala duwan iyo howl gallada ka dhanka ah argagixisada.
Xafladda tababarka lagu soo xirayay ayaa waxaa goob-joog ka ahaa xubno ka tirsan Maamulka Gobolka Gado, kan Degmada Baardheere iyo Saraakiil Ciidan, kuwaasoo goob fagaare ah ku daawaday qeybo ka mid ah casharradii ay soo qaateen Ciidanka iyo Gaadda ka ciyaar ay soo bandhigeen.
Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliya Jeneraal Bashiir Cabdi Maxamed ayaa sheegay in Ciidankan ay qeyb ka qaadan doonaan xoreynta degaannada ay ku sugan yihiin haraadiga kooxda Al-Shabaab.
Sidoo kale, Saraakiisha Millateriga Baardheere ee ku sugan ayaa sheegay inay aad u soo dhoweynayaan in qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Gedo ay yeeshaan Ciidan Boolis ah tan iyo burburkii dalka ka dhacay.